रुकुममा दलितमाथि ज्याजती भएको भन्दै कालिकोटमा बिरोध – Karnalipati
रुकुममा दलितमाथि ज्याजती भएको भन्दै कालिकोटमा बिरोध
कर्णाल‍ीपाटी । १३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार मा प्रकाशित
कालीकोटः शनिबार बेलुकी रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा दलिय युवाहरु माथि ज्याजती भएको भन्दै कालिकोटका युवाहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार लकडाउनमा बजार सुनसान रहेका बेला कालिकोटका युवाहरुले हातमा ल्पेकार्ड लिएर दलित माथि हुने बिभेद अन्त्य गर, रुकुममा दलित माथि ज्याजती गर्नेहरुलाई कानुन बमोजिक कारबाही गर जस्ता नाराबाजी सहित बिरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
बजारमा बिरोध प्रर्दशन पछि प्रतिमा चौकमा आयोजित बिरोध सभामा लिंलासैनी युथ क्लव कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मत मल्लले एकैशौँ सताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि हुने बिभेद अन्त्य नभएको भन्दै सरकारले रुकुमामा दलित माथि ज्याजती गर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरे । उनले भने, मुलुकमा संबिधान बनेको छ । दलितका हक अधिकारहरु काजगमा प्रसस्तै छन् । तर न्याय हराएको जस्तो जगन्य अपराधका घटनाहरुमा कमी आएको छैन् । उनले भने, अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्धले दलितको मृत्यू कहिले सम्म ? । छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गारौँ भन्ने नारा नारामा मात्र किन सीमित ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, आरक्षणको कुरा गर्ने बित्तिकै हलो जोत्ने गरिब बाहुन र ज्वईलर्स पसल गर्ने धनी सुनारको कुरा ल्याउछन् । हामीलाई आरक्षण चाईएन, धन आफै कमाउला, बरु गरिबै रहौला, समाजमा समान रुपमा घुलमिल हुन दिए पुग्छ ।
कार्यक्रममा अगुवा युवा भरत शाहीले रुकुममा दलित युवा माथि आकर्मण गरी ज्यान लिनेहरुलाई आजीवन कैदको सजाय हुनुपर्ने बताए । उनले भने, दलित युवाको ज्यान लिनेलाई सरकारले कडा कारबाही गरोस । घटनाको सत्यथथ्य छानबिन गरियोस । दलितको रगतमा केसैले राजनीति गर्ने अवस्था नआहोस । यस घटनाका दोषीको कारबाहीले मुलुकमा दलितलाई हुने बिभेदको अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना होस । प्रेम गर्दा ज्यान लिन पाईदैन् ।
मल्ल थरकी युवतीलाई लिन गएका दलित युवा र गाउँबासीबीच झडप हुँदा बेपत्ता तीन जना युवाको लास फेला परेको छ । अझै ४ जना बेपता छन् । युवाहरुले भने, बेपत्ता युवाहरुको खोजी गरियोस । सोतीमा गाउँले र युवाहरुबीच झडप हुँदा ज्यान गुमाएका भेरी नगरपालिका–४ नवराज विक र चौरजहारी नगरपालिका–१ टीकाराम सुनार र भेरी नगरपालिका–४ गणेस बुढाको परिवारलाई न्याय र उचित राहत दिईयोस । उनीहरुले दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही नभए युवाहरुले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । वर्गीय मुक्तिका लागि लडिएको भनिएको जनयुद्धको केन्द्र र जातीय छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा समेत गरिएको रुकुम पश्चिम यस्तो दुखद घटना घट्नुले अन्तराष्टिय जगतमा पनि मुलुकको शीर निहुरिएको उनीहरुको भनाई थियो ।